Budata Twitch maka Windows
Free Budata maka Windows (118.71 MB)
Enwere ike ịkọwa Twitch dị ka ngwa desktọọpụ Twitch na-arụ ọrụ na-achịkọta iyi niile kachasị amasị gị, ndị enyi na egwuregwu.
Ngwa ọrụ Desktọpụ Twitch, nke bụ sọftụwia ị nwere ike ibudata ma jiri kpamkpam na kọmputa gị, bụ ngwa bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile Twitch na ntanetị nke ya kama iji ihe nchọgharị ịntanetị gị. Ngwa ọrụ Desktọpụ Twitch ahụ jikọtara atụmatụ niile nke weebụsaịtị Twitch na ndị ọzọ.
You nwere ike ile mgbasa ozi kachasị amasị gị na Twitch Desktop Ngwa, chọpụta ọwa ọhụrụ ma denye aha na ọwa ndị a. I nwekwara ike ịkwado ndị nkwusa na Bits na Cheering. Ngwa ọrụ Desktọpụ Twitch ahụ na-ejekwa ozi dị ka ozi ozugbo, nkata olu na ngwa nkata vidiyo. Ọ nwere ike iji sọftụwia ahụ dị ka ihe ọzọ na ngwaọrụ dịka SKype ma ọ bụ Discord. Nwere ike inwe nkwukọrịta olu ma ọ bụ ogbako vidiyo na egwuregwu.
Iji Twitch Desktop App, ị nwere ike isonye na iyi na obodo egwuregwu ma kpaa nkata banyere iyi ọbụlagodi iyi ahụ anaghị arụ ọrụ. Can nwere ike ịnweta, budata ma wụnye mgbakwunye ndị etolitere maka egwuregwu site na Ngwa Desktọpụ Twitch.
Servers: Ezigbo ụlọ nke obodo gị ikori, lelee ma kpọọ ederede ederede zuru ezu na ime ụlọ. Jikọọ ọwa Twitch gị na ihe nkesa gị ka obodo gị nwee ike ilele ndụ ma jiri Twitch Chat na ngwa ahụ.
Izi ozi: Mmekọrịta Ndị Enyi na-ebubata ndị enyi na egwuregwu niile ị na-eso. Yabụ ịnwere ike iwepụta nwamba na ịkparịta ụka oge, izipu vidiyo na igwu egwu obere.
Ọdịyo: kristal doro anya na-akpọ oku netiti ndị enyi ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ otu ìgwè wakporo. Malite mkparịta ụka gị na onye ọ bụla site na izipu njikọ ịkpọ oku ozugbo na nkata ahụ. Ma ọ bụ zute ihu na ihu na ezigbo ndị ezigbo enyi gị, ndị na-agbada, na ndị otu egwuregwu site na oku vidiyo. Ruo mmadụ ise nwere ike ịkparịta ụka na HD mara mma. Ikesa ikenye niru bu kwa ikuku.
Addendum: Chọta, wụnye ma jikwaa mgbakwunye maka ngwa ndị kachasị amasị gị ozugbo na ngwa ahụ. Igwe ojii na-echekwa noge na-adịghị anya na-eme ka ọ dị mfe ịmegharị ntọala gị gafee ọtụtụ igwe. I nwekwara ike ime ka overlays na-egwu egwuregwu jikwaa ọdịyo na vidiyo gị na-enweghị alt-tabbing.
Nha faịlụ: 118.71 MB
Mmepụta: Twitch Interactive, Inc.